Neny Lalao Ravalomanana :Tonga nanefa ny adidiny – MyDago.com aime Madagascar
Neny Lalao Ravalomanana :Tonga nanefa ny adidiny
Tonga nanefa ny adidiny tetsy amin’ny biraom-pifidianana teny Faravohitra ny maraina teo Ramatoa Lalao Ravalomanana, sy Tojo Ravalomanana. Toy ny olom-pirenena malagasy rehetra manan-jo dia tonga nanao izay adidiny izay izy. Vao maraina tamin’ny 6ora izay fisokafan’ny biraom-pifidianana dia efa nirodorodo nilahatra handatsa-bato ny mpifidy tamin’ireo biraom-pifidianana izay nandehananay manodidina an’Antananarivo renivohitra.Sambany rahateo ny Malagasy no ampiasa ny biletà tokana amin’ity fifidianana ity, ka hita ho somary sahirana ihany ny mpifidy. Nisy vehivavy efa zokiny sendra anay dia nilaza fa tsy tao anatin’ilay toerana tokony asiana ilay marika « X » no nataony fa teo amin’ilay misy ilay laharan’ny kandida. Raha ny teto amin’ny EPP Anosibe dia vao maraina tamin’ny 7ora dia efa filaharambe (izay hitanao amin’ny sary) no hita teny an-toerana. Nilamina ny fizotry ny fandatsaha-bato tamin’ny fotoana nandalovanay teny tamin’io fotoana io. Na izany aza anefa dia betsaka ireo olom-pirenena ao anatin’ny fianakaviana iray no tsy nahazo kara-pifidianana ka nimenomenona tamin’ny filoham-pokontany. Arahintsika eto ihany ny tohiny.
Lalao RAVALOMANANA : tonga tamin’ny ranomasom-pifaliana !
ANKOLAFY RAVALOMANANA : TONGA NITSIDIKA AN-DRAMATOA RAVALOMANANA LALAO
Auteur Solo Razafy*Publié le 25 octobre 2013 25 octobre 2013 Catégories Politique
9 réflexions sur « Neny Lalao Ravalomanana :Tonga nanefa ny adidiny »
25 octobre 2013 à 7 h 35 min
Aoka tsy hisy mijanona any antrano androanay. Manefa ny adidiny daholo amian’ny famongarana ny foza.
25 octobre 2013 à 7 h 47 min
Manentana ny Malagasy haneho ny safidiny eeeeeeeeeeee;diniho,saino tsara anefa ny zava_drehetra vao mametraka ny marika hianao,zahay mou mbola aty amin’ny toeram-piasana fa apres midi mihitsy vao hanefa ny adidy,koa mahereza daholo ry Malagasy, ary manantena ny Mydago izahay mba hampita vaovao fona e,efa nafinartra be zao ataonreo zao
25 octobre 2013 à 8 h 02 min
Tandremo fa zava-dehibe iny VATO IRAY halatsakao androany iny ary SAROBIDY sy MASINA tokoa,
iny no HAMONO NA HANAVOTRA anao koa TANDREMO ARY! SOA LAVO AHAY HAMINDRA ry Malagasy.
Raha nahatsapa tena inao ho diso fa nofahanan’i Andry Rajoelin (domelina ) lalitra dia anio no fotoan hanoheranao izany hadisoanao
izany ary hisaory ny Avo mbola nanomė antsika ny andro anio , ko alahoery ary ry Malagasy fa ny valala hono tsy in-2 mandry am-
Isika tsy miasa loha @’izay ala-bato sns fa efao izay adidy tandrify anao dia ho mandry ny sainao, ankino @ Atra fa izy no mahita.
Efa resy anie ireo ary efa fantany izany FA tahotra ny @’ilay FITSARANA ny an’ireo satria fantany tsara ny nataony ka anjarantsika
no MIATRIKA izay mety ho HAGEGENA HISEHO vokatr’izay TAHOTRY NY FOZA IZAY.
Aoka isika hivonona foana ary tsy ho kivikivy raha vao misy zavatra fa HITRAKA hatrany,satria HOMBA ANTSIKA FOANA ANDRIAMANITRA.
Mahereza ry Malagasy mpiray tanindrazana rehetra , dia aoka isika hiray hina hatrany fa ny akanga maro tsy vakin’amboho.
25 octobre 2013 à 8 h 17 min
Misy vatam-pifidianana efa vonona ve, rahatoa ka feno ny iray ? Ny vatam-pifidianana rehetra tokony ho hita-mason’ny rehetra na feno na tsia !
Ary mba aiza daholo ny solontenan’ny kandidà sa tsy azo sary « daholo » ?
Izay tsy ao anaty lisitra tokony tsy mahazo mifidy kanefa dia hoe misy toerana na biraom-pifidianana, dia navela nifidy ry zareo !
Ahoana ny fomba ahafantarana ny anaran’izy ireo ? Nosoratana tanana ao amin’ilay lisitra ve ?
Ireo rehetra tsy ao anaty lisitra kanefa manana kara-pifidianana, navela hifidy sa tsia ?
Tokony misy cahier hoy aho omaly, dia afaka misoratra anarana daholo izay tsy avela mifidy, mba hahafahan’izy ireo manao fitoriana mitambatra !
Mangataka Fil infos avy amin’ny MyDago araky ny voalaza etsy ambony !
25 octobre 2013 à 8 h 19 min
Ilay tsikera ilaina, fa rehefa hita fa tsy dia hitondra vahaolana avelao aloha hidaboka any
fa ny ady hatrehana sy izay tokony hatao, tsy maintsy handrovi-tsihy koa ny alika mantsy,
Mety ho fandrebirebena koa ilay izy sao variana isika,mailo foana @’izay hatao fa ny ratsy tsy kely lalana.
Ilay tsy fananana karatra ohatra dia avelao ho any fa ento ny karapanondro dia alatsao ny vatonao ho an’i « Dokotera »
aoka koa isika hiezaka ho TONY tsara handray izay vokatra eo aloha, satria hiatrika ADY isika ,tsy vita eto izy ity
ny antsojay samihafa tsy maintsy hisy ka MILA FITONIANA NY HO HANATREHANTSIKA IZANY REHETRA IZANY
mba hanamora ny ady hanatrehantsika izay zavatra hitranga eo.
FARANY : raha tsy mazoto ianao ka mbola misalasala dia arotsay @ anarako ny vatonao ho an’i Dr Robinson mba
hanavotany ny firenentsika iombonana io fa za tsy afaka mifidy aty. MAMPALAHELO be za!!!
25 octobre 2013 à 8 h 45 min
25 octobre 2013 à 14 h 08 min
Bli!, Bli!, Bli! , hypocrite http://www.orange.mg/actualite/audio-rajoelina-jaimerai-que-madagascar-soit-exemple
Précédent Article précédent : NY VAHOAKA MALAGASY NO HAMPODY AN’I DADA
Suivant Article suivant : NOVEREZIN-JO NY MPIFIDY SASANY TETO AN-DRENIVOHITRA.